MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA PAPERANIAN - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Paperanian
Papillon / Pomeranian ey isku dhafan oo isku dhafan
'Kani waa Qaabiil. Waxaan hayaa mid kale oo ah 'Pom / Papillon hybrid' oo ah haweeney yey ah oo la yiraahdo Sky (oo laga arko dhinaca midig ee sawirkan iyo sawirada hoose). Labada eeyba waa iskudhafka naqshadeeyayaasha ee loo yaqaan Paperanian waana eyyo yar yar oo qurux badan. Waxay yihiin dad aad u bulsheed oo ay si fiican ula wadaagaan eeyaha kale iyo sidoo kale bisadaha. Eeyaha yar yar ee jilicsan ee jecel waxay jecel yihiin banaanka oo meel walba way i raaci doonaan, taasna waxaa ka mid ah inay dhex dabaasho durdur daruuriga ah. Waxay sameeyaan xayawaanka ugu fiican maadaama ay aad u jecel yihiin oo ay yihiin ma ahan kuwa wax iibiya oo waaweyn haddii aadan u oggolaan inay la baxsadaan. ''
silig timo timo dawacis leh
Paperanian-ku maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Balanbaalis iyo Pomeranian . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Sky ee Paperanian (eeyaha isku dhafan ee Papillon / Pomeranian)
'Colby the Paperanian at 8 bilood jir-aabihiis wuxuu ahaa Pomeranian, hooyadiis waxay ahayd Papillon.'
Tani waa jiilkii ugu horreeyay ee Ey Paperanian ah oo jira 3 toddobaad. Waa 50% Pomeranian iyo 50% Papillon.
Jiilka kowaad eey yaryar ee Paperanian ee 3 toddobaad jira (50% Pomeranian iyo 50% Papillon)
Papillon / Pomeranian iskutallaabta (Paperanian) oo leh gitaar
'Makanui waa Paperanian jira 16 bilood. Aad buu u macaan yahay oo dabacsan yahay. Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro eeyaha kale wuxuuna jecel yahay dadka waaweyn iyo carruurta. Wuxuu jecelyahay raacida gawaarida iyo socod magaalada hoose maxaa yeelay isagu waa nin bulsheed aadna u jecel inuu la kulmo dhamaan dadka magaalada dhex wareegaya. Waxaan u maleynayaa Maka inay tahay isku dhafka dabeecadaha. Isagu waa nin caqli badan isla markaana wuxuu soo qaatay amarro si dhakhso leh. Wuxuu ku raacayaa boorso yar oo diyaaradda ah aniga iyo ninkayga. Runtii wuxuu kamid yahay qoyskeena. '
'Kani waa mid kamid ah safarada Maka… wuxuu fadhiyaa barkadda hoteelka Fairmont Orchid ee ku taal Waikoloa, Hawaii. Waxaan jecel nahay inaan halkaas sii joogno maalmaha fasaxa ee usbuuca maxaa yeelay waa xayawaan rabaayo. '
Tani waa Maka Paperanian oo ah eey yar oo jirta 3 bilood.
'Tani waa Robin. Waxay qiyaastii tahay 10 toddobaad sawirkaan. Hooyadeed waxay ahayd Pom aabeheedna wuxuu ahaa Papillon tan / cadaan ah. Iyadu waa gabar yar oo feisty ah, gebi ahaanba aan cabsi ka qabin la kulanka eeyaha waaweyn. Waxay isku daydaa inay madaxooda ku booddo! Waxay kale oo ay jeceshahay la kulanka dad cusub waxay ula carari doontaa qof kasta oo jidhkeeda oo dhan gilgilmaya. Aad ayey u caqli badan tahay, wayna fududahay in la tababaro ilaa hadda Waxay xitaa taqaanaa sida loo istaago oo loo ciyaaro. Ma sugi karo inaan arko sida ay u ekaan doonto markay weynaato. '
'Robin, Paperanian-kayga ayaa hubinaya bocorkeedii ugu horeeyay ee Halloween. Waxay ku dhowdahay 9 bilood, waxaadna arkeysaa inay dhogorteedu aad u dheeraatay, laakiin ma ahan sida ugu dheer ee Papillon. Waa dheer tahay oo toosan tahay, dhabarka lugaheeduna waxay leeyihiin dhogorta ugu dheer — waa wax aad u qurux badan! Iyadu waa mid aad u feydan, waxay jeceshahay inay ku ciyaarto calaamadda oo ay cayrsato aniga ama Pom-Chi Bruce guriga agtiisa. Iyadu aad uma badna oo waxay sheegtaa, kaliya markay maqasho dhawaaqa albaabka ama marka eeyaha kale ee xaafaddu qaylinayaan, ka dib waxay ku ridi doontaa labadeeda senti wadahadalka. Waxay ku fiicnayd barashada adeecideeda aasaasiga ah ee barashada inay joogto xoogaa way ka adkaatay maxaa yeelay had iyo jeer waxay ku leedahay quraanjo surwaalkeeda, waxayna jeceshahay inay ku wareegto. Iyadu waa eeyga ugu macaan, in kastoo, waxayna isku dayi doontaa inay garabkaaga fuusho si ay wejigaaga u leefleexdo haddii aad u oggolaato! '
Eeg tusaalooyin badan oo Paperanian ah
Sawirada Paperanian 1
Liiska eeyaha Papylon Mix Breed
eey coton de tulear sawiro
Feeryahan doberman ayaa isku qasan eeyo yar yar oo iib ah
sawirada dhammaan eeyaha ey ku kala baxaan sida xarfaha isugu xiga
madow iyo tan american cocker spaniel
eey ugaarsi Afrikaan ah oo iib ah
naadiyada eyda isku dhafan ee america
ka gudub inta u dhexeysa isweydaarsiga cocker spaniel iyo poodle